यी हुन् श्रीमतीकाे दाइजोले धनी बनेका ‘गरिब’ नेताहरू « Naya Page
हेर्नुहोस् कसले कति पाए दाइजो
काठमाडौं : सरकारमा सामेल ‘ज्वाइँ मन्त्री’हरूलाई दाइजो दिएर ‘पहेंलपुरै’ बनाइदिने ससुरालीको आम्दानीको स्रोत के होला ? देउवा मन्त्रिमण्डलमा सामेल केही मन्त्रीको दाइजोमा आर्जित सुन, चाँदी, हीरा, मोतीको विवरण देख्दा ‘हर्ट अट्याक’ होला भन्ने डर !
चार महिनापछि सोमबार अपराह्न देउवा मन्त्रिमण्डलमा सामेल केही मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण नियाल्दा सर्वसाधारणको मनमा उठ्ने सवाल हो यो । प्रधानमन्त्री देउवासँग १० थान असर्फी, ४ तोलाको सुनको सिक्री, ५ तोलाको ब्रासलेट, ४ तोलाको हीरा, पन्ना, रुबी, मुगाजडित औंठी रहेछ ०५१ सालमा दाइजोमा पाएको । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसँग ७५ तोला सुन र २ सय ५ तोला चाँदी दाइजोबाटै आर्जित । माओवादीबाट परेका कृष्णबहादुर महरासँग सम्पत्तिको नाममा एभरेष्ट बैंकमा नगद ९० हजार मात्र । गोपालमान श्रेष्ठसँग ५० तोला सुन र १ सय १० तोला चाँदी । गिरिराजमणि पोखरेलले देखाएको सम्पत्ति विवरणमा नगद ८ लाख १५ हजार २ सय २६ रुपैयाँ ६६ पैसा मात्र, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दाइजोमै पाएको ३० तोला सुन, २ सय ५० तोला चाँदी, दुई सेट हीराको हार । यो बाहेक नगद ५ लाख ७५ हजार रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।
अध्येताहरूका लागि खोजीको विषय हो, एउटै ज्वाइँमन्त्रीका लागि ७५ तोलासम्म सुन दाइजो दिने ल्याकत राख्ने ससुरालीको आम्दानीको स्रोतचाहिँ के होला ? यसमा लाटोले पनि लख काट्न सक्छ ससुरालीबाट दाइजोमा आर्जित सम्पत्ति भनेपछि न अख्तियारले समाउने डर न त सम्पत्ति शुद्धीकरणकै खोजीमा पर्ने पिर ! दाइजोबाट आर्जित सम्पत्ति भन्यो– हाइसञ्चो ।